University of Sheffield - Kudzidza in United Kingdom. Education BRO
guta : Sheffield
Musakanganwa kuti kurukura University of Sheffield
Kunyoresa pa University of Sheffield
The University of Sheffield yakavambwa anodarika zana apfuura, nheyo pamusoro pezvaaishuva uye kutsigirwa nemari kwavanhu Sheffield. Vaida kuumba yunivhesiti izvo zvaizobatsira upfumi hwavo, utano uye vana.
Ava kure VANOONA varume nevakadzi chete vangadai vakashamisika zvaizorevei. Nhasi tiri pasi pose munharaunda yedu citizenship atambanudza munyika kupinda pamusoro 150 nyika. Kufanana guta redu, tsvimbo yedu uye vadzidzi vane midzi uye kubatana pamusoro redu.
Chii tikaramba tichiita hunobva netsika dzedu uye midzi dzakavamba kwedu nenheyo. Maitiro edu anofuridzira dzaungagona kutsigirana mhiri nyaya nzvimbo uye nevanhu, mabhizimisi uye masangano kugadzirisa zvikuru zvenzara matambudziko atinotarisana nawo, zvose pedyo kumba uye pasi pose.
Kuva yunivhesiti nedzevanhu zvinoreva kuti tiri nzvimbo pachena gakava, nokuti kushanda pamwe kugadzirisa matambudziko uye kuita kudyidzana izvo kudenha uye zvinokurudzira mafungiro matsva. Tiri yakazaruka vanhu, kushandura uye mukana.
Takanga inotangwa kuti zvazvinoita pane upfumi guta racho uye kuvandudza utano. A remakore gare gare, tichiri kuita izvi.
The University of Year mubayiro akaona hwomukova theSheffield Institute for Translational Neuroscience mari pamusoro £ 8m kubva vabatsiri omunharaunda uye varwere’ mapoka. Muzinda anoita kutema tsvakurudzo unopinza kupinda chetsinga ezvinhu akadai Motor Neurone Disease, Parkinson uye yeAlzheimer.
Our Advanced Manufacturing Research Centre ndiye UK raMwari kutungamirira yunivhesiti-mukugadzira indasitiri kubatsirana. Pamwe Boeing uye Rolls-Royce, 60 nemumwe makambani anoshanda 200 University mudonzvo (75% ndivo postgraduates) uye 150 Yomuchinda Trust kudzidzira.
A kabhoni-kwazvakarerekera Factory Nezveramangwana pachigaro adzikinura Colliery nyika, chinofananidzira omunharaunda pakuberekwa kutsva, uye AMRC akanzi Boeing nokutengesa Gore pamusoro makwikwi kubva 17,000 Makambani munyika yose - nguva yokutanga rokuti ichi aenda muUK.
Project Sunshine ndehwokuti kusunga simba zuva kuti vazoita guru dambudziko munyika nhasi: musangano kuwedzera zvokudya uye nesimba zvinodiwa vepasi panotaurwa ane hainyatsozivikanwi okunze uye zvakatipoteredza munyika shanduko.
The Grantham Centre anovaka pamusoro yedu groundbreaking Project Sunshine Kutsvakurudza zvokudya uye simba nokuchengeteka. The Grantham Centre ndehwokuti mberi sayenzi kuenderera uye batanidza pamwe mutemo gakava kumativi sei vanhu vanogona kurarama kupfuura inogona kuenderera nzira.
simba 2050 Chinotarisa sei tinogona kutamira rakachengeteka, kuderedzwa kabhoni simba hurongwa. Tanga anotaura simba dambudziko zvitatu pamusoro adzikinure inokwanisika, rakachengeteka uye inogona kuenderera simba.
Sheffield Political Economy Research Institute (tarisiro) Kunounza pamwechete zvichiita vaongorori dzakawanda mune zvesayenzi evanhu, Gwaro Vagadziri, venhau uye mafungiro formers kuongorora nokuyaruka, zvinhu vaitaura kuti kupindura enyika uye zvoupfumi matambudziko wakabvunzwa yose mari crisis nhaka.
Kana tsime sevakatarira outwards, tine chakadzama nesimba mukati. Kukosha vadzidzi kunooneka yedu kunoshamisa kuita muna National Student Chinogutsa Survey.
The University of Sheffield Students’ Union ari mabhii yavose sezvavakatarirwa pamusoro munyika iri Times yepamusoro Student Experience Survey.
Tinoona vadzidzi vedu kwete chete sezvo vatengi asi sezvo vaburitsi zivo, okugadzira zvinhu uye zvazvinoita. Semuyenzaniso, Sheffield Kuzvipira uye Sheffield Kurera uye Kupa (dhende), zvose kumhanya nenzira Students’ mubatanidzwa, vatinodzidza navo kuita musiyano munharaunda vemunharaunda.
Sheffield Kuzvipira ndeimwe zvirongwa pakukura nemarudzi muUK. It muenzaniso yakanakisisa tsika uye anobata newSheffield Volunteer Standard.
munharaunda yedu mabasa vakasikwa uye kumhanya nevadzidzi. Vanopa kunokosha zverutsigiro mukati munzanga uye kupa rubatsiro aizongoramba haapo.
Muenzaniso ndiye Chirungu Society Nokuti Kuda Books chirongwa. Kwavo nhetembo makirasi panzvimbo iyoyo kudzivirirwa pekugara kunge yakabudirira wakabatsira kuderedza zindoga uye utano uye kugara zvakanaka vakwegura vanhu vakawanda.
Sheffield dhende chiripo kubatsira vadzidzi kusimudza mari anoyamura zvinokonzera. Dhende kukosha ndiyo vemunharaunda yeko. Gore rapera 82% mari akamutswa vakanga kumamwe masangano ari South Yorkshire uye North Derbyshire nharaunda omunharaunda.
The dhende Committee anoronga purogiramu fundraising zviitiko uye mabasa kuti vadzidzi kuita ose dzingaparwe gore. Hanzvadzi yavo komiti Bummit anoronga ane UK wegore hitchhike uyewo munyika nerudo hitchhike. Dhende zvakare inotsigira nzanga, mitambo makirabhu, kushanda makomiti, Mapoka uye vanhu fundraise nokuti masangano ivo vanosarudza kuburikidza zvirongwa akadai Tanga-a-Charity vanoronga.
Tinewo akahwina Duke pamusoro York Community Initiative Award - kutanga chero yunivhesiti. Izvi zvakanga nokuti mabasa includingPhilosophy muGuta (kumhanya nenzira vadzidzi weDhipatimendi Uzivi); mudzidzi mazano vechidiki vanobva munzvimbo kunyimwa; mabasa vana vakawana kurasikirwa mhuri; uye muzinda kupa rutsigiro mubhadharo munharaunda.
Rorusununguko Arts uye Humanities
Rorusununguko Medicine, Dentistry uye Health
International weVadzidzisi Vedare – City College, Thessaloniki
Archaeology Aerospace Engineering Clinical Dentistry Animal uye Plant Sciences akitekicha Business Administration uye Economics
Chirungu Automatic Control uye Systems Engineering Human Communication Sciences Masvomhu uye Statistics East Asian Studies Computer Science
French Studies Bioengineering chirwere, kutapata & zvemwoyo Disease anorapa achishandisa mitemo Science Economics Chirungu Studies
weGermany Studies Chemical uye Biological Engineering The Medical School kemesitiri dzidzo Executive dance
vokuSpain Studies Civil & Structural Engineering Neuroscience Molecular Biology uye hwokushandura zvinhu zvipenyu jogirafi Psychology
History Computer Science Ukoti uye kusununguka Physics uye Astronomy Information School
Languages ​​uye Netsika Electronic uye Electrical Engineering Oncology & muviri Psychology nhau Studies
mumhanzi Zvaishandiswa Science uye Engineering Health uye Related Research (ScHARR) nzvimbo
mafungiro zvokuimba Engineering mutemo
chitendero, Theology uye Bhaibheri Management School
Russian uye kwechiSlavonic Studies zvematongerwo enyika
Sheffield Nzira Institute
Urban Studies uye Planning
The University of Sheffield yakatanga kubva zvitatu zvomunzvimbo masangano: ari Sheffield School of Medicine, Firth College uye Sheffield Technical School. The School of Medicine, inotangwa 1828, akanga ari mukuru. Nhoroondo yaro yokutanga kuchengeteka zvikuru uye akaponeswa kubva pokuwa kubudikidza Panovhurwa Firth College, iyo vakatora pamusoro dzidziso dzose dzinokosha nyaya sayenzi vadzidzi vezvokurapa.
Firth College aiva mumwe neboka yunivhesiti mumakoreji rakavakwa akazotevera remakore rechi19. It yakatanga kubva Cambridge University Extension Movement, zano zvakagadzirirwa nedzidziso yunivhesiti kumaguta makuru uye maguta England, zvizhinji akanga asina yunivhesiti urongwa. Kubudirira vachiravana idzi Sheffield akatungamirira Mark Firth, yomunzvimbo simbi mugadziri, kusimbisa College mu 1879 senzvimbo kudzidzisa Arts uye Science zvidzidzo.
The Sheffield Technical School aiva chigadzirwa vomunharaunda hanya kudiwa nani hwokugadzira kudzidziswa varume mutoro vachimhanya maindasitiri makuru Sheffield, kunyanya steelmaking. A rwokufamba chakatangwa mukati Firth College kuunganidza mari kuumba unyanzvi dhipatimendi, iyo yakatangwa 1884 sezvo Sheffield Technical School. mu 1886 Chikoro yakatamira muzvivako zvitsva pamusoro nzvimbo Girama School panguva St George Square.
mu 1897, vatatu nemasangano vakanga akabatana ne Royal Charter kuumba University College of Sheffield. danho iri raiva chikamu urongwa kubatanidza pamwe chete Victoria University, mumwe mubatanidzwa of University Colleges pa Manchester, Liverpool uye Leeds.
By 1900, zvisinei, Federal University akanga kuparara uye mumakore mashomanana akazvimirira mumayunivhesiti dzakaumbwa kubva vatatu University Colleges.
On 31 Chivabvu 1905 Yunivhesiti Sheffield akapiwa yayo Royal Charter, uye muna July itsva Firth Court Building musi Western Bank yakavhurwa naMambo Edward VII uye Queen Alexandra. St George Square yakaramba muzinda Zvakarurama Science madhipatimendi, pamwe Arts, Medicine uye Science vasina pokugara pa Western Bank.
The University mu 1905
Panguva nheyo University mu 1905 pakanga paine 114 yakazara vadzidzi kuverenga madhigirii Arts, Science kwakachena, Medicine ndikarangarira Science. mu 1919 kana kudzoka Aimbova servicemen vakanga akabvuma vazhinji, renguva yakazara mudzidzi mufananidzo akasimuka kuti pfupi yeGomo pamusoro 1,000. By ipapo rorusununguko Zvakarurama Science akanga rwakakamukana Engineering uye simbi; yeYunivhesiti Hall kuti Residence rokutanga (chepakutanga Stephenson Hall) dzakanga dzatangwa; uye Edgar Allen raibhurari vazarura (1909).
Panguva iyoyo University akanga sezvo vakazvipira vasiri dhigirii kudzidzisa kuti kudzidzisa yakazara vadzidzi. Courses akafukidza kwete chete zvedzidzo nyaya kwakajairika zhinji asiwo nyaya sezvo paiva mhou-vaitamba, njanji dzezvoupfumi, kuchera uye reza-nokugeda. Panguva World War First vamwe ava vakanga yakatsiviwa dzidziso (uye kupindurawo) munitions kuita, zvokurapa midziyo yemagetsi magadzirirwo kugadzirwa, rokushandura uye zvematongerwo enyika.
Pakati hondo mbiri yakazara mudzidzi nhamba kudzikamiswa panguva inenge 750 uye kuwedzera munzvimbo itsva nyanzvi pakudzidzisa uye tsvakurudzo akaramba zvishoma nezvishoma. The Second World War akauya nayo nzvimbo itsva nyanzvi yokutsvakurudza uye kurovedzwa – mu, semuyenzaniso, Radar, Mishonga uye vhitamini zvidzidzo, kugadzirwa dzokutindivadza uye mishonga (Sevamiririri zvinhu kare yabva Europe), remagineti, mafuta kugadzirwa upfumi, wengarava cartography, girazi gadzira uye Chirungu kudzidzisa mutauro.
Sezvo Second World War
Sezvo Second World War, vakura dzimba zhinji vakapinzwa zvedzidzo kushandiswa uye zvivako zvitsva zvikuru dzakavakwa – ari Main Library iri 1959, uye Arts Tower, Hicks Building, Alfred Denny Building, Sir Robert Hadfield Building, Chemical Engineering Building, University House, shanu Dzimba pamusoro Residence uye Union of Students vari Kuma1960.
Zvivako zvitsva kuti Geography uye Psychology vakatevera vari 1970, pamwe Crookesmoor Building (Mutemo uye Management), Zvaifanira Hallamshire Hospital, uye chinangwa-akavaka mudzidzi flats. Mumakore gumi akatevera akaona pakuvhurwa Zimbabwe Educational Center, ari Sir Henry Stephenson Building (nokuti ouinjiniya), uye Extensions zvikuru panguva Northern General Hospital.
Kuma1990, muzvivako zvitsva nokuti School of Clinical Dentistry, kuti Management School, weboka Education, St George Library (pakusanganisirawo Blackwell raMwari University Bookshop) uye Flats St George uye Lecture Theatre akazarurwa, pamwe chete Extensions kuna Stephenson, Halifax, uye Tapton Dzimba kuti Residence, itsva inoperera uye zvitatu mudzidzi flats.
The Regent Court chivakwa, iyo dzimba kuti Departments of Computer Science uye Information Studies uye Sheffield Centre Health uye Related Research, vakanga vapedza. The Union of Students huchibva £ 5 miriyoni budiriro chirongwa, kuvandudzwa zvakanaka, munzanga uye misangano zvivako.
Zvichitevera kusangana yeYunivhesiti pamwe Sheffield uye North Trent College of Nursing uye kusununguka mune 1995, chivakwa chirongwa akapa Zvivako zvitsva kuti ukoti uye kusununguka nedzidziso uye tsvakurudzo. Izvi zvinosanganisira kuwedzera uye Kutendeuka St George Hospital nzvimbo Winter Street, uye kuvaka chivako chitsva panguva Northern General Hospital.
Muzana remakore rechi21
The University kuda chinzvimbo Estates zano raramba kupinda mireniyumu itsva. Kembasi kuwedzererwa dzinosanganisira mhararano inonzi chirongwa £ mamiriyoni 80 kuti mumarabhoritari mune zvokurapa, sayenzi zvoutachiona uye panyama:
Custom-akavaka University Health Centre
Multidisciplinary Interdisciplinary Center of Social Sciences
Other zvirongwa zvinosanganisira:
The Diamond, ane £ mamiriyoni 81 chivakwa pamusoro Jessop East nzvimbo, ine nyanzvi ouinjiniya achidzidzisa zvivako, uyewo hurukuro dzemitambo, semina makamuri, rakavhurika-urongwa pakudzidza dzezvimwe, raibhurari kuzvipatara uye nemagariro dzezvimwe. It akafanotaurwa kuti vauye £ mamiriyoni 44,5 kupinda yomunharaunda upfumi paivakwa danho uye gore oparesheni rokutanga, ane chipo mberi gore upfumi Sheffield kwakaita £ mamiriyoni 20.6.
A £ mamiriyoni 20 mhararano inonzi yedu mubayiro-kuhwina Students’ Union uye dzinokosha University House chivakwa. Zvivako zviviri zvave revamped uye revatema pakusika kunoshamisa zvivako uye mabasa kuti vadzidzi, tsvimbo uye vashanyi
An £ mamiriyoni 8 mari chirongwa muna rorusununguko Medicine, Dentistry uye Health
A £ mamiriyoni 21 rorusununguko Engineering Graduate School, ari Pam Liversidge Building, uine nyanzvi zvivako kuti ouinjiniya dhigirii vadzidzi
Mhararano inonzi nhangaruvazhe yedu Grade II * dzakanyorwa Arts Tower chivakwa
zvivako zvitatu nokuti rorusununguko Arts uye Humanities: The Jessop Building, The Soundhouse uye Jessop West
£ mamiriyoni 160 chivakwa purogiramu redevelop chokugara pekugara pamusoro Endcliffe uye Ranmoor nzvimbo
Kutangwa £ mamiriyoni 20 North kembasi (Housing ari Kroto Research Institute uye Nanoscience uye Technology Centre)
Kuvakwa £ mamiriyoni 23 raibhurari chivakwa, Information Commons
The maira-refu 'kembasi’ zvino Anotambanudza anenge hworugare kubva St George Square mu Crookesmoor, pamwe mudzidzi dzokugara kusimbiswa namafuro kusvika kumadokero University. For yokutanga 50 makore aro kuvapo, yeYunivhesiti yakazara vemo mudzidzi haana hwokukurira 2,000. By 1980, zvisinei, akanga asvika 8,000 uye 2006 uwandu yakazara vadzidzi amuka kune 21,000. Vose vanogara mudzidzi zvino pamusoro 27,000 uye zvinosanganisira vadzidzi vaibva munyika yose.
Unoda kurukura University of Sheffield ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
University of Sheffield musi Map
Photos: University of Sheffield pamutemo Facebook
University of Sheffield wongororo
Join kukurukura pamusoro University of Sheffield.